Xog Xasaasi ah:-Jawaari,Farmaajo iyo Kheyre oo isku khilaafsan Magacaabista Golaha Wasiiradda & Dam Jadiid oo… | Kobciye24.com
Xog Xasaasi ah:-Jawaari,Farmaajo iyo Kheyre oo isku khilaafsan Magacaabista Golaha Wasiiradda & Dam Jadiid oo…
Dib u dhac aan sababteeda la shaacin, ayaa waxaa ku yimid magacaabista Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre, oo caawa la fillaayay in looga dhawaaqo Magaalada Muqdisho.
Xilli fiidnimadii caawa ay Madaxtooyada Somaliya soo gaareen dadkii loogu talla-galay in goobjoog ka ahaadaan magacaabista Golaha Wasiirada, ayaa si lama fillaan ahayd loogu sheegay in magacaabista dib loo dhigay.
Martida oo u badnayd Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa si is taabsi ah loo gaarsiiyay in dib loo dhigay magacaabista Golaha Wasiirada, illaa toddobaadka dambe.
Qorshuhu wuxuu ahaa in xaflad aan buurnayn looga dhawaaqo Golaha Wasiirada, balse uu qorshahaasi dhicisoobay, waxayna ka dambeysay markii kulan albaabada u laabnaa ay yeesheen Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo, Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre iyo Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu ka carooday qaabka, ay Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaruhu u soo xuleen Golaha Wasiirada, taasina ay dhabaha u xaartay kulankoodan.
Ilo wareedyo, ayaa sheegaya in carrada Jawaari ay salka ku hayso, iyadoo Farmaajo iyo Khayre ay Wasaaradaha ugu muhiimsan la doonayan shakhsiyaad ku dhow dhow, oo maalmihii la soo dhaafay soo gaaraayay Magaalada Muqdisho.
Wararka waxay intaa ku darayan in Jawaari uu ku doodayo dowladda in ay ku dhisan tahay nidaamka awood qaybsiga beelaha ee 4.5, shakhsi kasta oo la magacaabayana loo baahan yahay in taageero uu ka haysto beeshiisa, isla-markaana aan la magacaabi karin wax aan u cuntamayn beelaha.
Dhanka kale Farmaajo iyo Khayre oo markii hore kalsooni iyo ballanqaadba u muujiyay xubno ka mid ah Golaha Shacabka, ayaa waxaa soo baxaya in ay ku ballan furayn, isla-markaana ay bedelkoodu ku soo bedeleen diblomaasiyiin.
Jawaari, ayaa waxaa la leeyahay wuxuu labada masuul u sheegay in aanay ku hungowbin xubno aan kalsoonida ka heli karin Baarlamaanka.